DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland: ”Farmaajo wuxuu hareer maray nidaamkii lagu heshiiyay” +Shir Jara’id – HalQaran.com
DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland: ”Farmaajo wuxuu hareer maray nidaamkii lagu heshiiyay” +Shir Jara’id
Boosaaso (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Saciid Cabdullahi Deni oo Jimcihii maanta shir ja’raaid ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay khilaafka dowladda federalka iyo maamul goboleedyada.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa sheegay in Puntland ay shir wada-tashi arrimaha dowlad dhiska Soomaaliya ah ku qabsan doonto magaalada Garoowe, bartamaha bisha March ee Sanadkan.
Mr. Deni ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya “inay faro-gelin xooggan ku hayso” arrimaha maamul goboleedyada.
“Waxbadan ayaa madaxda Dawladda Faderaalka la hadalnay si howsha taagan loo dhammeeyo balse aamuskayaga ayaa waxaa loo qaatay inaan waxa soconaya raali ka ahaano ” ayuu yiri Deni.
Hadalka Madaxweyne Saciid Deni ayaa ku soo aadaya xilli khamiistii shalay ay Puntland howlahii ka joojisay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka.
Halka hoose ka dhageyso Nuxurka Shirka Jaraa’id:
Tags: Boosaaso, eedeeyay dowladda, Saciid Cabdullahi Deni, Shir jaraa'id, Shir wada tashi
Turkey extends mandate of its forces in Somalia’s waters
Wasiirka Amniga Jubbaland C/rashiid Janan oo sharraxaad ka bixiyay qaabkii uu uga baxsaday Xabsigii lagu xiray